OS X vs Linux: yekupedzisira kurwa | Kubva kuLinux
OS X vs Linux: yekupedzisira kurwa
pandev92 | | GNU / Linux, Zvimwe
Ini ndanga ndagara ndiri mudziviriri wezvemahara software, inokwana kwemwedzi mitanhatu kwandaivewo neyangu Gnu troll nguva, nguva yandakatsoropodza zvese zvakauya de Windows uye zvakatonyanya, izvo zvakabva apuro. Chiono changu chave kuchichinja zvishoma nezvishoma, pamwe nekuti ini handichatendi kuti hupenyu hwepc hwakakosha sekushungurudza marezinesi uye mamwe maruva akasiyana, saka ikozvino ndinozvipira kushandisa masystem ese anoshanda pamushini wangu.
Kubva pane zvese zvataurwa pamusoro, pfungwa yekuyedza kuisa OS X Snow Leopard, pane yangu yepakati kufa kufa, iyo yandakawana mushure mesvondo rekutambura uye kunetsekana nekumisikidza uye kugadzirisa.
Kamwe kuiswa kwacho kwaitwa, ndakataura neshamwari yangu Gaara nezve kugadzira chinyorwa kuenzanisa mashandiro e osx y Linux iine AMD Turionx2 PC uye Mobility mifananidzo Radeon 4650.
Paunosvika ku OS X, chinhu chekutanga chaunoona idesktop yakanaka, mapfupi ekhibhodi uye mamwe mapurogiramu akaiswa-mberi, anobatsira se Time MachineAsi zvakadii nezvekuita kwePC mifananidzo yemachipisi?
Kungori kuita kwakaderera, asi kusiri kuregeredzwa, muchina unokanda yakawanda processor kupfuura mifananidzo, kunze kwemitambo, asi chakanyanya kuvhundutsa ndechekuziva kuti kune makadhi mana kana mashanu chete, ayo anotendera kushandisa giraidhi yekumhanyisa kuona mafirimu, saka Kana iwe uve neprosesa senge Intel i4 kana yakadzika, usatarisira kuzokwanisa kutarisa 5p zvakatsetseka, uye hautarisire kutsanangudza kwakakwira flash
Pamabhurawuza ese andakaedza, Firefox, safari, Google Chrome y Opera Inotevera, iyo yega inoshandisa gpu kumhanyisa, ndiyo yandaida kwazvo dhanzi (kusiyana)saka ndakanga ndisina imwe sarudzo kunze kwekushandisa iyi.
Muchikamu chemitambo, ndakashamisika kuona mamwe madoko akadai sePro Evolution kana Fifa, pamusoro pekuona kuti kune nharaunda yakazvipira kuratidza mitambo iyi (Ini handina zano rekuti vachazviita sei). Iko kuitisa mumitambo kwakati murombo kana iwe usina hombe magirafu kana cpu, asi ivo vachiri kutamba.
Kuwanda kwekushandisa kwakaratidzika kunge kwakaderera kwandiri, uye zvizhinji zvandaifarira, ndaifanira kuzvitenga, asi hongu, mashoma aivapo, aikosha chaizvo, dzimwe nguva hazvibatsiri kuva nevatambi vemimhanzi vashanu, kana hapana chinosangana nezvinotarisirwa. Zvichida pano pane mukana wakakura we OS X about Linux, Kuva nekutengesa zvekushandisa senge MS Office, Virtual DJ, iyo Adobe kana Steam suite.
Iko kudzikama kwakakura kwazvo uye mubatanidzwa wayo nechitarisiko chakachengetedzwa zvakanaka uye kuremekedzwa kwekutaridzika uye kunzwa kwepuratifomu nezvose zvinoshandiswa, zviite yakanaka Windows imwe nzira. (Zvino kana iwe ukafunga kana iwe uchida kuyedza paMac kana a hackintos yezvidimbu zvakafanana zve 300 kana 400 euros zvishoma.)
Pakupedzisira, ini ndaona kuti yangu CPU inopisa zvishoma pane Windows o Linux, Handizive kuti nei….
Zvese izvo zvataura, ini ndinoshora pachena kuoma kwekugadzirisa kwayakaita OS X, kutsoropodza mashoma sarudzo ari mune yezvaunoda mapaneru, isa kupi Linux kukunda nekukunda. Kana paine chimwe chinhu chatinoda Linuxers, kugona kuita nekombuta yedu chero chatiri kuda: D.
ari ATI en Linux, Ndinodzokorora, hazvishandisike muLaptop ine mahara madhiraivha, nhasi kupisa kwakanyanya uko kunokanganisa. MuLinux isu tine vhidhiyo yekumhanyisa raibhurari kune vese ATI / AMD chinhu icho mu OS X hapana kana zvirinani zvangu hazvishande.
Chiteshi OS X y Linux iwo akafanana, pachokwadi ini ndakakwanisa kuyedza mizhinji mirairo uye vakashanda.
Linux zvichiratidzika senge iri nani chikuva chebudiriro, iyo chete nzira yekuunganidza mukati OS X iyo iwe yawakawana, kwave kuri kuisa Xcode, Ini handina kuwana imwe nzira yekuzviita ndisipo.
Kana iwe usingade zvekushandisa zvekushambadzira, ini ndichiri kuzvitenda izvo Linux inosangana nezvose zvinodiwa uye kana zvikasadaro iwe unoda kubvisa Windows uye uine pc yakatsiga, asi usingasiye akawanda mafomu awakashandisa, OS X chinhu chako.
Pakupera kwezvose, ini ndichiri kufunga kuti hazvina basa kuvhara mune imwe chete sisitimu yekushandisa, ini ndichiri mweya wakasununguka uye hapana chimwe chinonakidza sekuziva mashandisiro ezvese zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » OS X vs Linux: yekupedzisira kurwa
Asi iwe hauna kuenda pamudyandigere?
Ini ndakafanana naMichael schumacher, dzimwe nguva ndinowonekazve xD
Shinga hama, wauya, kwaziso, yako blog yasuwa, haufunge kuita chinhu chitsva?
Ini ndinofunga ndasvika padanho rekufananidza Windows vs OS X vs Linux zvinoita kunge zvisina musoro kwandiri, chaizvo.
OS X Iyo OS yemushandisi iri kuda kubhadhara yakawanda yeHardware uye kuti zvese zvinoshanda kekutanga. Kune rimwe ruoko zvese zvichave zvakanaka, zvinoshanda chaizvo, asi kune rimwe racho unorasikirwa ne98% (kana zvimwe) yekutonga pamusoro peSystem yako. Yakanakira Vagadziri kana vashandisi vanoshanda neMultimedia uye zvakare vane Kit yakakwana yeGadget (iPhone, iPad, iMac kana MacBook).
Windows An OS yemushandisi uyo anoda kubhadhara yakawanda yeSoftware uye kuti zvese zvinoshanda mushure mekuisa akawanda madhiraivha. Ichakanaka asi pane zvese icho chidiki "chinowanikwa uye chinoshandiswa", pamusoro pezvo, iwe unorasikirwa ne99% (kana 100%) yekutonga pamusoro peSystem. Yakanakira maGammers.
GNU / Linux Iyo OS yemushandisi iri kuda kubhadhara (pamwe) kuchengetedza inoenderana Hardware uye mapurojekiti. Inogona kuve yakanaka sekuda kunoita mushandisi, sekureba sekunge ivo vachiwedzera kugona uye kufunga kune desktop kana hwindo maneja wavanoshandisa. Inoshanda zvakanaka pa90% yemakomputa, uye une 99% (kana 100%) kutonga pamusoro pesisitimu yako. Yakanaka kune vashandisi vanoda kudzidza, programmers kana avo vasingade kuzviisa kune izvo zvinongedzo zveRedmond neCupertino.
Zvakawanda kana zvishoma ipapo ini ndinoona chinhu icho.
Iwe murume, ndinoona kuti handisi ndega kuti zvifananidzo izvi zvakakubereka 🙂
+1 ndinobvumirana newe.
Chirevo chacho chaive chisinganetsi. Kugona chose. Iwe wakanyaradza zvese zvatinoverenga painternet mukati memakore mashanu apfuura !!!
Kune mamwezve mapoinzi asingaoneke nekuti haasi "ekunze" kana kuti "chinangwa" ... asi ngatione kana ndichiisa pangozi zvishoma kuti ndivaratidze.
Os X: OS yemushandisi anodzvinyirira, anowanzozvitutumadza uye aine simba rakakwirira rekutenga. Bhizinesi uye wepanyika pfungwa uye kugona kwekugadzira uye kugadzira. Tenda mumitemo yemusika sechitendero. Gorilla, neoliberalists uye "vane fashoni uye avant-garde" vanhu vanosarudza ino sisitimu
Mahwindo: Iwe unoda kubata mafashoni mp3s uye kurodha pasi mahara? Iwe unoda kuudza shamwari dzako kuburikidza nesocial network kuti hwakawanda sei uye hunosvibisa hupenyu hwako? Unoda kurodha yakawanda yeHollywood mafirimu kusvikira maziso ako ajeka? Iwe unoda kutamba nekutamba nekuti vabereki vako Uye rudo harupo.Iwe unoda kubata maneja kana kambani uye unoda software yehunyanzvi? Unoda kunzwa "kuchengetedzeka" uye simba reantivirus. Sarudza iyi system.
GNU / Linux: Kana chimwe chinhu chakaitika muhupenyu hwako chakakutorera iwe kubva pakubudirira newawakadzidza navo kubva pawaive mudiki uye vasikana havana kukutarisa ... dai iwe usingambove nemabhora ekuzviratidza iwe sezvawaida uye mazhinji nguva dzavakakutonga ... kutsiva kuburikidza nelinux, chenjera uye uzive kupfuura dzimwe tsoko idzo dzinoshandawo pc asi dzisinganzwisise chero chinhu! Kubva pano, mune ramangwana isu tinotonga nyika. Yakakosha yemagariro mapurojekiti asingagumi chero kupi uye maNGOs anoda kuchenesa zvivi zvavo. Inzwa zvirinani pane mudiki munhu iwe zvauri: Linux.
kuseka ¿hahahaha !!!! kwaziso vanhu.
chirevo ichi hachifambi chaizvo nemusoro wepositi
Pindura kune Chechitatu
Inogona chete kuva imwe?
Ndakataura pazasi, ini handina kugutsikana nekuziva kushandisa imwe chete, hauzomboziva kuti hupenyu hwuchakuendesa kupi, kunyangwe hupenyu hwako hwebasa :).
Ipapo ini ndatozadzisa, ndinogona kushandisa ese hahahaha.
Zvakanaka, BSD kunze kweapuro tsime hongu ...
Asi wakatarisana nemaitiro maviri here kana kwete? Ndiani akunda kurwa kwekupedzisira?
Ndichave akatendeka newe. Kune iro zita ndaitarisira kupinda kwakakomba. Ndakafungidzira vhidhiyo senge iri kuYouTube, uko Tux anorwisana neWindows logo. Kana iyo imwe iyo iyo Tux ninja inotarisana nerobhoti.
Hahaha handikwanise kuita mavhidhiyo, kuti vanhu vazhinji vanoti not suar flash xD…, ahahahaa. Handina kutaura kuti ndiani anokunda, aripo mumwe nemumwe, asi ndinazvo zvakajeka :).
PaMac pane application inonzi iMovie kuitira kana iwe usingazive
Mhh ndanga ndisina kuzviziva, ndichaona zvinoitika.
Ichokwadi ndechekuti pamutengo weMAC zvinoita senge chirafu kupfuura chero chinhu. Asi chero munhu anoda kuishandisa ikodzero yavo, nekuti igadziriro yakanaka. Avo vasingadaro, chirongwa chepuraimari chinotaridzika zvakanaka kwazvo, kuunza inoyevedza asi inokurumidza uye yakapusa interface kuti ikwanise kushandisa pamakomputa asina simba 😀
Zvakapesana chaizvo. Iko hakuna chero kuenzanisa kwekuchangobva kuitika. Ndinoda kuona kuenzaniswa pamwe nekuvandudzwa kwazvino kweGNU / Linux, madhiraivha ayo, enzvimbo dzemifananidzo nezvimwe.
Pindura kune biomes
Huyai asi nemutengo we mac, kana tichienzanisa mac tichipesana nePC, iri Hardware kana iri sisitimu inoshanda, ngatitaurei chokwadi, kushandisa apuro system haisi iyo nzira kwayo, hauzove nerutsigiro uye zvirokwazvo kanopfuura kamwe iwe uchave nematambudziko senge iwo iwe wawaive nawo mukuisa iyo iwe uchangobva kuitumidza. (uye urikubhadhara icho). Sisitimu yega yega ine zvayakanakira nezvayakaipira, iyo mac system haibvumidze zviri pamutemo, ndinofuratira windows kuiisa pane mac hardware (kunyange ichikwanisa) kana microsoft ichipa izvi sekutsigira, uye linux zvakanaka zvirinani pane shanduro dzakagadzirirwa mac . Iyo mac system yakanaka yakachena, asi iwe unofanirwa kubhadhara kune ese ari maviri masoftware uye software (unogona kuwana yakavhurwa sosi mac kana makomputa, zvinoita kwandiri kuti hauna kuzvitsvaga izvozvo.) Vakarasikirwa zvakakosha zvinhu zvausina kutumidza zita it.
Zvakanaka, iwe unofanirwa kuona zvakanaka, ini handifarire rutsigiro rweapuro, kana mumahwindo uye mu linux ndinotova nayo asi ini ndinobhadhara redhat kana chimwe chakadai. Izvo zviri pachena ndezvekuti iwe unogona kukwira pc senge mac, kune mazana mana kana mazana mashanu emadhora mashoma kana iwe uchiziva kutsvaga, haina kumbonyanya kuoma futi.
Ini ndinofunga kuti shumba album yaidhura makumi maviri emaeuro ...
Dambarefu reChando Leopard rakandidhura € 29 uye ojo, gadziridza, iwe waifanirwa kunge uine Leopard yegehena, dai zvisiri iyo albha yanga isina kukosha.
Rangarira kuti haufanire kubhadhara xD, kana iwe ukaisa inonzi pirate ingwe, haamboziva, nekuti haina kukumbira serial kana chero chinhu.
Zvakanaka hazvo, asi yakazara yaive € 29 iyo kana vakasagara mubhengi renguruve.
Muchokwadi, iwo ruzivo rwekuti ndine Leopard harudikanwe, ini ndakavandudza kubva kuTiger uyezve nguva dzandadzosera ini ndangoda iyo yekuvandudza DVD, haina kuita chero ongororo, ehe, iwe unorasikirwa neiyo iLife application package
Iko kuita / mutengo muyero unoita senge chitsotsi kwandiri, mune yakajeka chimiro ini ndaona yakanyanya kunaka KDE desktop, zvakare ichibhadhara $ 10 yechikumbiro chinogona kuitwa nescript. Nenzira yekubhadhara zvirongwa uyezve nekuvandudzwa kwavo nezvose zvakachengetedzwa ndinogona kukanda goridhe pc yangu. Ipapo inokuudza iwe kuti komputa yako haigone kumhanyisa iyo OS nyowani uye kana iwe ukaona iyo yakafanana yekare ine matatu matatu ekuvandudza.
Munhu mupasi rose zvinhu zvese zvakabhadharwa, ini handioni dambudziko, ndanga ndatotaura kuti handingatenge mac, kukwanisa kuimhanyisa papc yangu, saka kana vasingazondibiridzi xD.
Zvese zvinobhadharwa? Ndiyo sooooo hama ... Ini handina kubhadhara peni kushandisa Linux mint. Kana ini handina kubhadhara hard disk ye140gb diski iyo yandakatora kubva pakakanganiswa laptop uye ikozvino ndinoshandisa bvisika diski xD ...
Unogona kubhadhara runako nezvakanaka kana zvakaipa neambotaurwa "karma" (murphy….) Asi zvakanaka.
Asi mu KDE unoisa sei mamenu ekushandisa kumusoro senge muOSX uye Kubatana?
Izvo zvakakosha kuti uve nenzvimbo yemahara uye nekugadzirisa ese mamamenyu zvakanaka
Kune rimwe divi, kuvhurwa hakuna kushata, asi kunofanirwa kukwanisa kugadzira mabhuku emabhuku (sekunge iwe waipfuura nemashizha / mapikicha) kana chirongwa chakanaka cheGarageband -style (rosegarden iri aesthetically kubva pagore repari) .nekugadziriswa kweJackd, uye pinda + jackd nekuti ivo vanorwa pachavo kuitira kuti zviome zvakanyanya nani OSX
Makorokoto !! Iyi yekupedzisira mbiru iri kuve yakanakisa. Pese pandinofarira iyi blog zvakanyanya.
Ndatenda 😀 😀
Zvakanaka, zvekupa maonero ako ... uye huya, usasiya izvo zvinongova zvohunhu, ndinoziva kuti vanhu vazhinji vanotenda kuti chitsotsi, uye chokwadi ndechekuti mitengo yakakwira kwazvo, asi semuenzaniso Apple laptop ... bhatiri rinogara kwakawanda Ivo vakareruka, havapisi, iyo trackpad inofadza uye iyo skrini yakafanana, ini ndinoda iyo sisitimu, asi chokwadika, inokupa iwe yakawanda rusununguko, ipapo mumwe nemumwe anoshandisa zvavanoda. Kunyangwe iyo sisitimu yandinonyanya kufarira iLinux, handigone kuvanza kuti yangu laptop yaive nefekitori bhatiri hupenyu hwemaminetsi makumi mana uye iine Hardware inoenderana matambudziko kunyangwe iine Windows, saka 40 € yemacbook air inogona kuve yakakodzera ).
Pindura kuti uwane
Ndinoda kuyedza mac-osx, uye ini ndichaedza kuita switchch, chinhu chete chandimisa ndechekuti pc yangu, yaive naamai vacho "vakafa", asi ndiri kuvaka imwe.
Kana rimwe zuva ini ndichida rubatsiro, ingobvunza :), ndiri pano kuzobatsira nezvose zvinotora, kuti pasave nemunhu anopedza svondo achiedza seni ehehe.
Chinyorwa chakanaka! Ini ndinonamira nemutsara wako wekupedzisira uye nekutaura kwaElav.
Ndiri kuona OS semidziyo. Imwe neimwe inoshandisa iyo inokodzera zvakanyanya zvavanoda.
Pindura kuna e2391
«Kugadziriswa kune zvatinoda» .. uye iyo yekugadzirisa imwe kudiwa kwerusununguko munzvimbo ipi neipi (zvakare iri chaiyo) yenzanga kana yepasi, huh, haha ​​.. ndinoti iwe unofanirwa.
Ini ndinofunga Chromium / Chrome inoshandisa GPU Kumhanyisa kubva mushanduro 11, uye tiri kuenda kugadzikana 17, uye ye19 mukuvandudza. Iwe unofanirwa kunyora mune nezve: mireza tebhu uye gonesa inoenderana.
Ndakaedza, asi kana ndichiita yekumhanyisa bvunzo, zvakadaro hazvishande, mu safari ndiri kutarisawo maitirwo azvo, asi handina kuwana nzira.
Ini ndaishandisa Mac mazuva mashoma pabasa rekupedzisira randaive naro, uye kana ndiri kuchengetedza mari yekutenga imwe, kungave kubva kumesoji ayo CPU yakanamatira (zvese mune imwe ivo vanovaudza) kana mhepo yemacboc.
Ndakafarira chiitiko cheMac.
Mweh, ini ndiri mumwe weavo vatengesi vejunk vanotora izvo zvavanowana ndokuzvitenda ... Uye Linux yakandishandira zvakanaka nekuda kweizvi. Muchokwadi, chinguva chidiki ndakazviwanira Mac yechinyakare uye yakasviba kumba kweshamwari, pamwe neiyo laptop ye2005, uye haina kuvhurika ... Mushure mekuenda neshamwari yemagetsi (hongu, ndinozvikomberedza nemari hombe ye geeks kubva kumakirasi ese) uye ipapo ndakatanga kukanda ma distros pairi ... ini handisati ndagona kuwana imwe inoshanda 100% kwandiri asi kana ikandizadza saka ichave iri pa92% yemasimba ayo (Debian ndiyo yakanakisa yeizvi, inotsigira zvese shit) ...
Damn Diki Linux
Totali inobvumirana, kunyangwe ini ndanga ndakavakirwa pane izvo, hazvisi zvese zvinogona kuve 10Gb ye RAM uye i7, zvakare yakaderera-magumo atinogara papuraneti pasi xD.
..kana, tese tine rusununguko rwekuenda kujeri, hapana dambudziko. LOL !!
Yetsika .. yekusimudzira kutaurirana (uye kwete nekuti une hupenyu hwako kana kuti kwete pc), usashandise chimwe chinhu chinokurudzira kunyangwe chiri chakanaka. Izvo hazvina chekuita nekuve iyo GNU troll kana inoshanda system kugona. SL ndeye software yemagariro. kwete chishandiso kubva kumusika wega. Huya, iwe unotoziva zvese izvi. Iva netsika !! batsira nyika uye funga yakanaka !!
rodolfo arguello akadaro
Iyo mac inogona kukurumidza (kune rakashama ziso) asi ivo vakaganhurirwa, zviri nyore kukwidziridza inoshanda sisitimu kune Hardware yakashomeka seiyo mac (sezvo ivo vachisarudza kuti ndeipi Hardware yekubvisa uye kumisikidza iri pro seye con), pachinzvimbo maPC aripo akasiyana siyana, ini ndoda kukwanisa kugadzirisa kuisirwa linux senge izvi (izvo zvaunogona asi zvinotora nguva yakareba, iro chete iro distro rinoita iro gentoo). Ndinoda kuziva kana iri kukurumidza kutanga uye kuita. Nekungova chete nekernel yakagadzirirwa zvimwe zvigadzirwa, uye kuunganidzwa kwezvirongwa zvecpu. Kana paine gentoo mushandisi ndizivisei kuti ndigovane icho chiitiko.
Pindura kuna rodolfo arguello
Mukoma wangu anga achizoshandura kubva kuUbuntu kuenda kuMacOSX kare kare, zvinosuwisa mushure mekumabhotoro, akaramba achirongedza uye asina kupfuudza kumhanya uye iye kana ini kana iye aisaziva kuenderera mberi, chokwadi ndechekuti isu tanga tiri nungo kwazvo.
Ini ndaigara ndichifunga kuti ingadai yakave yangu Ubuntero-hama kana MacOSX yakanga yamhanya: P.
kanokwana kwemwedzi mitanhatu kwandakavewo neangu nguva yeGoll troll, nguva yandakatsoropodza zvese zvakabva kuWindows uye zvakanyanya kunyanya, izvo zvakabva kuApple.
Chinhu chinondipa neGNU. Vanopomera chero chakaipa chimiro kunyangwe ivo vasina chekuita nazvo.
Kuve unotsoropodza uye / kana wakasununguka muvengi weMicrosoft kana Apple kana chero ani, ane chekuita zvishoma neGNU uye Mahara Software.
ZveGNU, FSF uye Mahara Software zvinokoshesesa ndezvekuti software ndeye Mahara uye kana iri (*) kunyangwe yaibva kuMicrosoft yaizogamuchirwa zvakanaka. Uye kana zvisiri, kunyangwe iri peya remoni rekushanda kana rakagadzirwa nenheyo yevasina mhandara vasista, kwete.
(*) Zvinonzwisiswa zvakare kuti software haifanire kunge iine chinangwa chekudzora, kusora, kushungurudza, kukuvadza, "kudzora" mushandisi.
Iyo anti-mamwe masystem uye pro Linux militancy ndeyaLinuxTroll, TuxTrolls, nezvimwe; izvo redundancies parutivi, chikonzero chayo chekuve ndechekusimudzira zvese zviri iyo penguin uye zvakatonyanya kurwisa isiri iyo penguin, kunyanya mumunda wesimba rayo rakananga. Vanhu ava zvakare mune dzakawanda zviitiko vane zviyero uye zviyero zvinosarudzika zvinoenderana nechiitiko, asi icho chimwewo chinhu.
Ini ndinotengesa hapana munhu pano akamboona GNU Troll. Handirangariri ndichiona chero.
Pane chimwe chinhu chisingarambwe, iyo Mac UI inorova kumeso kweiye wawaiisa pamberi pake, kunyangwe iwe uchigadzirisa yako linux kana windows ...
Ini handina kana kupedza kuverenga chinyorwa nekuti mukutendeseka kwese kwakanaka asshole> :(
Enzanisa mashandiro eMac, ane kambani, inodakadza seayo Orwellian uye zvemari marongero, ari mutungamiri mukusimudzira uye hunyanzvi hwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, maringe nemuchina wemageneti unomhanyisa generic GNU / distro Linux ibenzi zvachose. Apple inomiririra kusanganisa software / Hardware kunyangwe hazvo kazhinji kazhinji vachitora nhanho isiriyo (senge maMac mamodheru emakore 2010/2011 ane mashandiro akasiya zvakawanda kuti zvidikanwe) uye GNU / Linux inomiririra kukura nekusvetuka uye bounds saka inova nyaya yenguva yekubata, ini pachangu ndinoshandisa HP Pavilion 4287cl ine Intel uye ATi hybrid VGA ine openource driver uye chokwadi ndechekuti kuziva kugadzirisa zvese kernel uye mamaboardboard uye zvakare kushandisa PowerTop 2 iyo nyaya yekupisa ingano yakazara.
Nezve iyo inoshanda system: MacOS SUCKS. Ini ndashandisa zvese SnowLeopard neShumba (10.6 na10.7) kwenguva yakati wandei izvozvi uye vari claustrophobic uye isingatsungiririki, hazviite kune mumwe munhu anoshandiswa nerusununguko uye kushanduka kweGNU / Linux kushandisa.
Ini ndashandisa Macs zvakanyanya, zvese zviri zviviri 23 ″ iMac neMacBook Pro, uye nekunze kwekugadzirwa kwekunze (uye mune dzimwe nguva kuvakwa kwehardware) iyo keyboard haina kukwana uye software yacho yatonyanya ...
Dai ndaifanirwa kushandisa yakakosha software pabasa rangu, semuenzaniso Autodesk kana chimwe chinhu chakafanana nehunyanzvi odhiyo / vhidhiyo kugadzirisa yangu yekutanga sarudzo iWindows, iri zvakare inosemesa asi ka20 yakachipa pane mutengo wepamusoro wavanokubhadharira iwo Mac uye iwe unogona shandisa chaizvo zvakafanana software pane zvine simba Hardware.
Nenzira, waiziva here kuti Mac inotengesa "maseva" ayo anodhura, asi ayo maseva anomhanya pane HP's AIX uye Debian GNU / Linux?
Mac inoyamwa, kana iwe uchida kuyedza iyo Mammoth yakafanogadza-kuisa VMware mifananidzo kurodha pasi.
Ini handisi kuzokupindura nezve dhongi nekuti zvirinani kuti iwe unogona kushandisa yakajairika Spanish, nezve chimwe chinhu, icho chausingade macs hazvireve kuti ivo shit, bvunza linus torvalds uye iwe uchaona izvo achakuudza. Ini ndinotenda nemoyo wese kuti macbook, nemhepo, pamwe nelenovo pc ndiwo chete mapc anokosha kutenga. Osx hurongwa hwandinoda, senge ini ndinoda Windows 8 muchikamu uye chakra yangu ine kde, ndicho chinhu chakanaka chekusave Taliban sevamwe.
Mac ndinoigamuchira yakanaka uye yese fart, asi Windows 8 zvakakomba iwe unofarira iko kutevedzera kwekutsvoda mifananidzo hybrid pakati pehumwe neKde?, Shamwari chenjera uye upfeke magirazi nekuti iyo win8 skrini iri kukusiya uri bofu XD.
Zvakanaka chokwadi ndechekuti, ini handina chandinopesana nacho mac, iri yakanaka kwazvo mashandiro asi inodhura uye kana chimwe chinhu chandisati ndamboita muhupenyu hwangu kubhadhara iyo software.
Kana ari windows iwe une maviri sarudzo, juggle kuti uape masevhisi angangoita maawa mashanu, mukuongorora uye kuisa utachiona, kudzikisira uye nekuchenesa marejista nerejcleaner kana kurega iyo system ichirema uye izere nemavhairasi (WinXP chiitiko, WINVISTA UYE WIN2) . Windows inogona kubiwa uye haumbobhadhare imwe chete.
Ichokwadi ndechekuti ini ndinoda Debian yangu uye yangu Linuxmint hapana chimwe chiri nani kupfuura icho, asi inovhara zvandinoda uye maererano nemitambo nekuti ini ndinoda mitambo yakapusa seLugaru, opensonic neMegaglest kupfuura iyo inorema kupfuura dzose yandiinayo, zvakare iyo cube yekurwisa .
uye ndiri gammer ne linux. Kana iri yekuita, processor yangu hachisi chinhu hombe, iri yepakati 2 duo ine 2gb yegondohwe uye yangu system inotanga ne100 mb yegondohwe uye iyo yakawanda yainoshandisa yave 520 mb, ini handidi zvimwe.
Asi sekureva kwaEvav, mumwe nemumwe anoshandisa zvinoenderana nezvavanoda.
Zvakanaka, ini ndinoda iwo madiki makwere zvirinani kupfuura zvakajairika interface, chaunoda kuti ndikuudze, semuenzaniso ndinovada ivo kupfuura gnome Shell, asi zvakadaro nekuda kwekunakirwa kwemavara.
Tinotozviziva uye tinoremekedza chitendero chako. shamwari, kwaziso.
hahahaha iyi hondo yekushandisa masystem. vanotaridzika sehondo dzechitendero. Ivo vanofanirwa kuita mutongo weruramisiro, iripi mac, linux uye windows kuti vawane chibvumirano.
Isu maqueros ndisangano remumvuri ahaha kubva ku batman xd
Ndakaverenga mune zvakataurwa pamusoro apa kuti ivo vanoona kuenzanisa kweaya matatu masisitimu anoshanda asina musoro. Hazvina musoro? , maererano neni, uku kuenzanisa (uye gakava rakabatanidzwa) kushoma kuri kupusa. Mumakomputa emakomputa isu tine chete masimba matatu muOS (linux ine hunyanzvi hwekuve nekuparadzirwa kwakasiyana neanopindirana akasiyana asi imwechete kernel uye base OS, senge "red ngowani" kana "debian", iyo yekupedzisira inoshandiswa ne "ubuntu") neAnguva yehupenyu yebasa kugadzira iyo hombe mitsara yekodhi (yakakosheswa pamamirioni emadhora, isina kugadzirwa muzuva kana gore) Iyo nharo yakavhurika, asi maonero angu (akapfupikiswa) ndeyekuti gnu / linux inoziva kutora mukana weiyo Hardware zvakanyanya, izvo zvinogadzira chirongo chekare chine, semuenzaniso, Ubuntu 10.10, inomhanya zvirinani kupfuura nemakwikwi ayo, Windows 7 , kana kunyangwe iwe uchigona kuisa OS X, linux yaizoramba ichiwana mukuita. Zviripachena kuti kune zvibairo kana isu chete tine gnu / linux, asi pane izvo isu tine rusununguko rwekuva nezvakawanda. Saka zvakadaro, ndinofanira kunge ndine Windows yekugadzira zvinyorwa zvemashoko, kana kutamba mitambo yemavhidhiyo uchishandisa Windows directX. Saka kupokana uye kuenzanisa kweaya maSO matatu zvichiri zvisina musoro? … Ok, saka ngatirambei tichitenga MacBooks ine OS X nekuti "inotonhorera" (kutsvinya). Chinyorwa chakanaka.
Linux Deepin: imwe Ubuntu-based Distribution neGnome Shell
Inowanikwa Midori 0.4.4